ယူနီကုဒ် ရှင်းတမ်း – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
အရင်က MyanmarLanguage.Orgမှာတင်ထားတဲ့ ကိုမောင်ဆန်း ရေးထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်း ယူနီကုဒ်ကို လူတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားလာကြပြီး ထောက်ပြဝေဖန်မေးမြန်းတာတွေ ရှိတဲ့အထဲမှာ ညီလင်းဆက်ရေးခဲ့တဲ့ Review on Myanmar Unicode 5.1 & Suggestion ကို ပြတဲ့ပြီး ဒါတွေရှင်းပြီးပြီလားလို့ မေးတဲ့လူတွေ ရှိလာလို့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ယူနီကုဒ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေ၊ Developer တွေက ကိုယ်စီ ရှင်းထားကြပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်တာရယ်၊ မြန်မာလိုရေးထားတာဆိုရင်လည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း မရှိတာကြောင့် တစ်နေရာတည်းမှာ စုစည်းပြီး ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
· All Myanmar Unicode Proposals and revisions (1996-2008)
· A HISTORY OF THE MYANMAR ALPHABET (1994)
· Khmer – Unicode Consortium
· Myanmar – The Unicode Standard (6.0)
· Han Unification in the Unicode Standard
· Sealang Mon Lexicon
· Proposed PDAM for ISO/IEC 10646-1: 1993/Amd. xx: 1998 (E)
· Myanmar Unicode Research Papers & Reference Documents
← Previous Previous post: MCF Expert Roundtable Discussion on Unicode Migration and Technical Support
Next → Next post: ယူ​နီ​ကုဒ် စာလုံး​စီ​ပုံ – Unicode Encoding
3 thoughts on “ယူနီကုဒ် ရှင်းတမ်း”
သန်းဇော်ဝင်း ဖိုးသောကြာ says:
October 10, 2019 at 20:20
Whatanice article. Thanks!